DOWNLOAD DVDFAB NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
Usoro usoro nhazi ngwa draịva anaghị abụ nsogbu maka ndị ọrụ - anyị na-etinye ngwaọrụ ahụ n'ime kọmputa ma na-agbado usoro nhazi ọkọlọtọ. Otú ọ dị, ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịpị USB flash drive n'otu ụzọ ahụ, dịka ọmụmaatụ, kọmputa ahụ adịghị achọpụta ya? Na nke a, ị ga-eji ngwá ọrụ a na-akpọ HP USB Disk Storage Tool.
Ngwá Ọrụ Nchekwa Diski HP USB bụ ihe dị mfe iji rụọ ọrụ nke ga-enyere gị aka ịhazi usoro USB flash, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọghị agbakọta ya na ngwaọrụ ndị arụnyere na sistemụ arụmọrụ.
Ebe ọ bụ na usoro ihe a adịghị achọ ka e dozie gị, ịnwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na ya ozugbo ịnwere ibudata faịlụ ahụ. Iji mee nke a, pịa faịlụ ebudatara ya na bọtịnụ òké aka wee họrọ ihe omume "Run as Administrator".
Ọ bụrụ na ị gbalịrị iji ọsọ ahụ na-agba ọsọ ahụ (site na ịpị ugboro abụọ na bọtịnụ mkpọtụ aka ekpe), usoro ihe omume ahụ ga-ekwupụta njehie. Ya mere, ọ dị mkpa mgbe niile ịmepụta HP USB Disk Storage Tool na nnọchite Nchịkwa.
Ịhazi ya na HP USB Disk Storage Tool
Ozugbo usoro ahụ malitere, ị nwere ike ịga n'ihu na ịkpụzi.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwa flash drive na NTFS, n'ọnọdụ a na ndepụta nke "Njikwa faili" họrọ ụdị usoro nTFS faịlụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpụ USB flash drive na FAT32, wee si na ndepụta nke usoro faịlụ, ị ga-ahọrọ FAT32, karị.
Na-esote, tinye aha windo mbanye, nke a ga-egosipụta na windo "Kọmputa" m. Iji mee nke a, jupụta n'ọhịa ahụ «Ụdị olu». Ebe ọ bụ na ozi a bụ ihe ọmụma, ị nwere ike inye aha ọ bụla ị chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kpọọ oku ngwa ngwa "Documents".
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịwụnye nhọrọ. Ngwá Ọrụ Nchekwa Diski USB na-enye onye ọrụ ọtụtụ nhọrọ dị otú ahụ, n'etiti nke a na-enwe usoro ngwangwa accelerated ("Ngwa Ngwa"). A ghaghị akara ọnọdụ a n'ọnọdụ mgbe naanị ị chọrọ ihichapụ faịlụ na nchekwa niile site na USB flash drive, ya bụ, dozie teepu kaadị faịlụ.
Ugbu a na agbadoro usoro niile, usoro nhazi nwere ike ịmalite. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ "Malite" ma chere ka usoro ahụ mechaa.
Uru ọzọ nke HP USB Disk Storage Format Eji Ngwá Ọrụ tụnyere ngwá ọrụ ọkọlọtọ bụ ike ịkpụpụta USB flash drive, ọ bụrụgodị na edere ya ederede.
Hụkwa: mmemme ndị ọzọ maka formatting draịva flash
Ya mere, n'iji naanị obere HP USB Disk Storage Tool you can solve several problems at once.